သင့်ဇနီး စိတ်ဆိုးချိန်မှာ …
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီး အလီနော်တို့ဟာ စားသောက်ဆိုင်မှာ ညခုနစ်နာရီလောက် ဆုံတွေ့ပြီး ညစာစားကြဖို့ သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အလုပ်မှာ အစည်းအဝေးရှိနေတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ချိန်းထားတဲ့ နေရာကိုရောက်ဖို့ အတော်လေးနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်ကို ကျွန်တော် တစ်နာရီကျော်နောက်ကျပြီး ရောက်သွားတဲ့အခါ...
ဆရာဝန်ထံသို့ စိတ်ကျန်းမာရေးဝေဒနာရှင်တစ်ဦး ရောက်လာတယ်။ “ဘာတွေ ခံစားရသလဲ ပြောပါဦး” “ဘာမှ စားလို့မရဘူး ဆရာ” “စားချင်စိတ်မရှိတာလား” “မဟုတ်ဘူး ဆရာ၊ စားလို့မရတာပါ” “ဘာကြောင့်လဲ၊ သွားကိုက်လို့လား၊ အစာမျိုလို့ မရတာလား၊ ဗိုက်အောင့်တာလား” “မဟုတ်ပါဘူး ဆရာ . ....
အနည်းဆုံး သူ့အတွက်တော့ ထူးခြားသွားပါတယ်….
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ဘုရားဆွမ်းတော်တင်တဲ့ ဆွမ်းပွဲစွန့်တဲ့အခါ ပုရွက်ဆိတ်တွေတက်နေတာကို ဒေါ်မြက တစ်ကောင်ချင်းဖယ်ရှားနေတယ်။ (မဟုတ်ရင် ဆွမ်းပွဲကို စားတဲ့သူပါးစပ်ထဲ ပရွက်ဆိတ်တွေ ဝင်ကုန်မှာလေ) ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးလူအေးက မြင်တော့- “ပုရွက်ဆိတ်တွေကအများကြီး၊ တစ်ကောင်ချင်းဖယ်နေတော့ကော ရှိရှိသမျှ အကုန်လုံးကို ဖယ်နိုင်မှာမလို့လား၊...
သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဖုန်းကာဗာအမျိုးအစားက သင့်အကြောင်းပြောပြနေပါတယ်
———၊ ကိုထက် ၊——— လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်သူတွေက သူတို့ရဲ့ ဖုန်းလေးတွေကို အမြင်ဆန်းသစ်စေဖို့၊ အကြမ်းခံစေဖို့ စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ ဖုန်းကာဗာတွေ တပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် မိန်းကလေးအများစုဟာ သူတို့ဖုန်းလေးတွေကို အလှဆင်တဲ့အနေနဲ့ ဖုန်းကာဗာမျိုးစုံကို ဝယ်ယူအသုံးပြုလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ရွေးချယ်စရာ ပုံစံမျိုးစုံရှိတဲ့အထဲမှာမှ မိမိစိတ်တိုင်းကျ...